Mz ဉာဏ်စမ်း- စာမျက်နှာ7— MYSTERY ZILLION
မူလ › Daily Life › quiz
As for me, It's depend on our aim !
ဒီလိုပါ အပျင်းလေးပြေ ဗဟုသုတလည်းရအောင်ပေါ့.ဥပမာ- အင်တာနက်ဆိုတာဘာလဲ ကွန်ပျူတာတွေဘရ်နှစ်ကစပေါ်တရ်
သတ်မှတ်ထားပေါ့ ၁ ပတ် စသဖြင့်ပေါ့..
(ဖြေနိုင်ရင်တော့ ဘာလက်ဆောင်မှရဘူးနော် ဟီး)မေးခွန်းဖြေနိုင်မယ့်သူမရှိရင်လာရင်တော့ အဖြေကဘာဆိုပြီး ပြောပြပေးပေါ့
အဲ့ဒါမျိုးဆို ကောင်းမရ်ထင်ပါတရ်..ဘာလို့ဆိုတစ်ခါတစ်လေကျ သိချင်တာမျိုးရှိတရ် ကိုယ့်ဘာကိုရှာဖို့ဆိုတာကျလည်း
အချိန်မပေးနိုင် အဲ..အဲ့အခါမျိုးကျ ဉာဏ်စမ်းမှာ၀င်ကြည့်လိုက်ရင်သိနိုင်တာပေါ့...နောက်တစ်ခုကဘရ်လိုပြောမလဲ..
ပထမဆုံးတွေပေါ့ ဥပမာ ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး OS ကိုဘရ်သူစတီထွင်ခဲ့သလဲ။ဘရ် Software ကိုတော့ဇြင့်ဘရ်သူကစလုပ်ခဲ့သလဲ..
MZ ကြီးတည်မြဲတိုးတက်ပါစေ....Cheer!!!!!!!!(ရောသွားလို့ အဟီး)
ညဏ်စမ်းလေး တစ်ခုပါ Internet နဲ့ computer တို့နဲ့တော့ တိုက်ရိုက် မပတ်သက်ပေမယ့်
တွက်ချက်မှု ဆိုင်ရာညဏ်စမ်းလေးပါ အပျင်းပြေလေးပေါ့ Balance ညီအောင် တစ်နည်းအားဖြင့် ဟိုဘက် ဒီဘက် ဘက်ညီအောင် အရေအတွက် တူညီစွာ တွက်ပေးရတဲ့ ညဏ်စမ်းလေးပါ ကဲကဲ စကားကြောရှည်နေပြီ စပြီ
ခို (၁) ကောင် ၂ ကျပ်ခွဲ (၂ကျပ် ၅၀ ပြား) ပေးရတယ်
၀မ်းဘဲ (၁) ကောင် ၅ ကျပ် ပေးရတယ်
စာကလေး (၁) ကောင် တစ်မတ် (၂၅ ပြား) ပေးရတယ်
ပိုက်ဆံ (၂၅) ကျပ်နဲ့ အကောင် အရေအတွက် ကလည်း (၂၅) ကောင်ရအောင် တွက်ပေးရမှာ
MZ မှ ရွှေညီ အစ်ကိုအစ်မများ ပျော်ပျော်ကြီး တွက်ပေးကြပါ လွယ်ပါတယ် သိပြီးသားလည်းဖြစ်မှာပါ။
၀မ်းဘဲ - ၃
ကို Vassilihunt ဂုဏ်ပြုပါတယ်။
နောက် တစ်ခုက ကလေး (၂) ယောက်ရှိတယ် အကြီးတစ်ယောက် အငယ် တစ်ယောက်
သူတို့ရဲ့ အသက် (၂) ခုပေါင်းက ၁၁ နှစ်
အသက် (၂) ခု ခြားနားချက်က ၁၀ နှစ်
အကြီး အသက်ဘယ်နှနှစ် အငယ်အသက် ဘယ်နှနှစ် ရှိမလဲ? Computer မပေါ်ခင် ရှေးယခင် က ညဏ်စမ်း အသေးလေးပါ
ပေ ၃၀ ရှိတဲ့ ရေတွင်းထဲမှ ဖားတစ်ကောင် အပေါ်ကို ခုန်တက်တယ် တစ်ခါခုန်တက်ရင် (၃) ပေ ရောက်ပြီး (၂) ပေ ပြန်လျှောကျတယ် ရေတွင်းမှ လွတ်အောင် ဖား ဘယ်နှကြီမ် ခုန်ရမလဲ
ရှေ့ က Post တွေ က အလေးတွေ ဆိုတော့
ဒီမှာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးပဲ တင် ပေးလိုက်တယ်
ဒါ ပဲရှိလို့ပါ ဟိဟိဟိ
ကလေး အကြီးက ၁၀ နှစ်ခွဲ၊ အငယ်က ၆ လသား
... ဖားက ၂၈ ခါခုန်ရမှာ.......ဒီဖားဉာဏ်စမ်းက အချိန်ကန့်သတ့်ချက်နဲ့ အမြန်ဖြေခိုင်းရင် အတော်ပျော်စရာကောင်းမှာ...................
ကို Thitmin မှန်ပါတယ်
Zin Min Nwe
Zin Min Nwe wrote: »
မေးခွန်းက မပြည့်စုံသလို ပေးထားချက်က တစ်မျိုးကြီးပဲဗျ
Sneakernet ဆိုတာကတော့ Computer တစ်လုံးမှ Data တွေ အခြား Computer ဆီကူးယူဖို့ CD တွေ Flopy Disk တွေနဲ့ burn ပြီး လူကိုယ်တိုင် လူးလာခေါက်ပြန် သွားရပါတယ် အချိန်ကုန်ခံ လူအပင်ပန်းခံကာ Computer တစ်လုံးမှ တစ်လုံးဆီ Data တွေ သွားသယ်ရပါတယ် အဲဒါ အဆင်ပြေဖို့အတွက် Networking ဆိုပြီး ကြံဆ ခဲ့ကြပါတယ်
Sneakernet ကို အဆင်ပြေစေရန် ဆိုတော့
အဖြေက Networking ပေါ့
မှန်ရင် ခေါင်းတီးမယ် ဟီး :P :P :P
ကျန်တော်လဲ တခု ဝင်မေးမယ်နော်......
မြန်မာနိုင်ငံမှာ Internet ကို ဘယ်နခုနှစ်က စပြီ:သုံးတာလဲ????
ကျွန်တော်လည်းမေးမယ်... philosophy မေးခွန်းပေါ့...
အဖြူ + အဖြူ = အမဲ
အချစ် + အချစ် = အမုန်း
အဲဒါဖြေပေးကြပါ... (ကျွန်တော့်မှအဖြေမရှိပါ... မသိလို့မေးတာပါ...)
1958,Feb, မှာ ARPANET မှစတင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်
ကမ္ဘာ့ ပထမဦးဆုံး Computer ရဲ့ Keyboard မှာ Key ဘယ်နှခုပါခဲ့လဲ? နောက်ဆုံးဖြေကြားနိုင်မည့် အချိန်ကို ၂၀၁၂ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၄ ရက်နေ့လို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ >:D<